Ganacsiga Ganacsiga Google
Bishii Abriil ee la soo dhaafay, waxaan sameeyay qoraal ku saabsan Ganacsiga Google. Toddobaadkan dhammaadkiisa, waxaan ka soo qaaday gabadhayda ballanta timaheeda. Saloonku wuu qurxoonaa, dadka ka shaqeeyaana waxay ahaayeen kuwo cajiib ah. Mulkiilaha ayaa i weydiiyay waxa aan nolol u qabtay waxaanan u sheegay in aan shirkadaha ka caawiyo suuqgeynta internetka.
Waxaan taagneyn kombuyuutar wuxuuna ila wadaagay in barta uu ka iibinayo ay sidoo kale sameysay degelkiisa. Waxaan ka codsaday inuu ka raadiyo Google “Timaha Stylist, Greenwood, IN“. Up ayaa soo saaray khariidad fiican oo uu kujiro dhamaan tartamadiisa… laakiin ma jiro wax soo gal ah oo uu kuleeyahay saloonkiisa. Waan dhex maray isagoo ganacsigiisa ku daabacaya Google My Business waxayna qaadatay 10 daqiiqo oo dhan.
Haddii aad ku jirto ganacsiga iibinta degellada ganacsiyada gobolka ama sameynta mashiinka raadinta maxalliga ah, sidee uga bixi kartaa tan istiraatiijiyaddaada? Waa bilaash, waxay ku jirtaa meesha ugu sareysa bogga natiijooyinka raadinta, waana sahlan tahay in la isticmaalo! Google xitaa waxay kudarsatay bogga cusbooneysiinta heerka deegaanka.
Xitaa haddii aadan ahayn ganacsi goboleed, weli waxaan kugula talin lahaa inaad isticmaasho Google My Business. Ganacsiyadu waxay jecel yihiin inay ka faa'iideystaan ​​ilaha maxalliga ah maxaa yeelay way ka fudud yihiin la xiriirka, booqashada, iyo taageerada ay ka helaan. Dukaan ku iibso, iibso maxalliga ah, ka raadi deegaanka ... oo qor ganacsigaaga si lagu helo. Bing sidoo kale waxay leedahay Xarunta Liistada Deegaanka
Tags: khariidadahaganacsiga googlegoogle ganacsigeygaraadinta maxalliga ahhagaajinta mashiinka raadinta deegaankamaxalliga ah
Waa maxay Awoodda Mawduucu?
Waxaan u maleynayaa in wadiiqooyinka badan ee aad gudbiso macluumaadkaaga aadna dhiseyso joogitaanka ganacsigaaga, inbadan oo indho-fiiqis ah oo aad heli doonto isla markaana ay sii xoogeysaneyso sumaddaada. Ganacsiga Maxaliga ah ee Google ayaa hubaal ku jira liiskayga!
Inta badan milkiilayaasha meheradahu waxay aad ugu mashquulsan yihiin xayeysiinta shirkadooda bogagga shabakadaha ama internetka taas oo ay marar badan iska indhatiraan fursadahaan. Tani waxay si gaar ah run ugu tahay hooyo gabowday iyo ganacsiyada pop-ka, kuwaas oo had iyo jeer ku tiirsanaa ereyga magac sumcad ee shirkadooda.
Waxaan waqti badan ku bixinay in aan ku wanaajinno ganacsiyada macaamiisha maxalliga ah Ganacsiga Gudaha ee Google iyo sidoo kale Khariidadaha iyo adeegsiga Khariidadaha Khariidadaha. Tusaale ahaan mid ka mid ah boggaga shirkad dhigashada baarkinka garoomada ayaa kala bar taraafikada ka heleysa khariidadaha keli keli ah. Haysashada ganacsigaaga maxaliga ah ee ku yaal bogga koowaad waa mid muhiim ah waxaanan u aragnaa fursad macaamiisheenna maaddaama aan ka helno iyaga bogga koowaad dhowr jeer "ereyada furaha lacagta". Waxaan jecelahay inaan macaamiisha ka helo Maps, PPC iyo Natural. Tan markaan sameeyo waxaan dabooli karaa 10-15% dhammaan bogga hal dhisme. Marka macaamil macquul ahi sameeyo baaris oo uu arko wax ka badan hal liis garayn kor ama ka hooseysa laab laab waxaan aragnaa ganacsiyo badan oo cusub, oo aan ku xusnayn macaamiil cusub.